အမေရိကန်ကြက်ကြော် Easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အမေရိကန်ကြက်ကြော် Easy cook
အမေရိကန်ကြက်ကြော် Easy cook
Posted by weiwei on Jun 17, 2011 in Food, Drink & Recipes | 15 comments
wei's cook ကြက်ကြော်
ကြက်သားကြော်ကို ကလေးတွေ သိပ်ကြိုက်ကြပါတယ် … ဆိုင်မှာသွားစားတိုင်း ဘယ်လောက်စားစားမ၀ဘူးလို့ပြောတတ်ကြလို့ ကျောင်းပိတ်ရက် အိမ်မှာပဲ ကြော်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ် … ဆိုင်မှာဝယ်စားတာထက် ပိုသန့်ပြီး ဈေးနှုန်းလဲ ပိုသက်သာပါတယ် … လွယ်လွယ်ကူကူ ကြော်စားလို့ရပါတယ် …
ကြက်သား (အသားတိုးကြက်) ……… ၂ ပိသာခန့်
ဆီ ………. ၇၀ ကျပ်သားခန့်
ဆား ………. အနဲငယ်
ကော်မှုန့် ………. ၁၅ ကျပ်သား
ကြက်ဥ ………. ၅ လုံး
bread crumb (ပေါင်မုန့်ခြောက်အမှုန့်) …….. ၂၀၀ ဂရမ် တစ်ထုပ်
ကြက်သားကို အနေတော်အတုံးလေးများတုံးပြီး သေချာဆေးကြောကာ ဆားနဲ့နယ်ထားရပါမယ်။ တစ်နာရီခန့်ဆားနဲ့နှပ်ထားပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားရပါမယ်။ ကြက်ဥကို အကာသီးသန့်ထုတ်ပြီး ခေါက်ထားရပါမယ်။ ကော်မှုန့်နှင့် အပွမှုန့် ကို သီးသန့်ပန်းကန်ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ အိုးထဲမှာ ဆီပူအောင်တည်ထားပြီးနောက် ကြက်သားတုံးကို ကော်မှုန့်နဲ့အရင်ကပ်တယ်။ ပြီးတော့ ကြက်ဥအကာအရည်နဲ့လူးတယ်။ ပြီးတော့ ပေါင်မုန့်ခေါက်မှုန့်ထပ်ကပ်ပြီး ဆီပူအိုးထဲ ထည့်ကြော်ပါတယ်။ ဆီကို ကြက်သားမြုပ်လောက်အောင်သုံးနိုင်မှ အတွင်းကအသားအားလုံး နူးပြီးကျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်.. ပုံကြည့်ရတာတော့ စားလို.ကောင်းမယ့်ပုံပဲ
home page မှာ ပုံအမြည်း စာအမြည်းမပါတော့ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဆွဲဆောင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နော် …
မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ကြက်တောင်ပံ လုံးဝမစားဘူး။ ဒီရောက်တော့ ကြိုက်သွားတယ်ဗျို့… သူငယ်ချင်းကပြောတယ် ကြက်တောင်ပံစားရင် အရမ်းအားရှိဆိုပဲ… အဲဒါကြောင့်တော့ ဟုတ်ပါဘူး၊ စားလို့ကောင်းလို့……
တရုတ်ပြည်မှာ ကြက်တောင်ပံက ကြက်တစ်ကောင်လုံးမှာ ဈေးအကြီးဆုံးပဲ … တရုတ်မှာ ကြက်ရင်ပုံသားက ဈေးအပေါဆုံး …
ရန်ကုန်မှာတော့ ဈေးအတူတူပဲ … ဒါပေမယ့် ဈေးနှုန်းသေချာတွက်ကြည့်ရင် မြန်မာပြည်ကကြက်သားက တရုတ်ပြည်က ကြက်သားထက် ဈေးကြီးနေတယ် …
အတော်စားကောင်းမဲ့ပုံပဲနော် .. လုပ်စားဦးမယ်… ။
ကြက်ကြော်တော့ ကြိုက်တယ် လုပ်စားကြည့်မယ်ဦးမယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့KFC စားကြတော့ ကျနော်စားချင်တဲ့ တောင်ပံအပိုင်းမှာနေတုန်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ် “ကြက်တွေကို ဆေးထိုးရင်တောင်ပံကနေထိုးတာ” တဲ့
မဝေ အချက်အပြုတ်အလွန်ကောင်းပုံရတယ်.. အစားအစာအတော်များများ စားချင်စရာဘဲ :D
စားချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ … မီးတို့ဆီမှာက ရောင်းတဲ့ဆိုင်မရှိဘူး … ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်စားမှ စားရတာ … အခု နည်းသိသွားပြီဆိုတော့ လုပ်စားလို့ရပြီ …. ကျေးဇူးပါ ….
မှတ်ချက်။ မဝေတင်ထားသော ဟင်းချက်နည်းများအတိုင်း တွေ့ဆုံပွဲတွင် မဝေမှ ချက်ကြွေးမည်… :D
ကုန်ကျစရိတ်ကို သဂျီးမှ ပေးမည် …… :D
ကိုယ်တိုင်လုပ်စားရတာထက် လုပ်ပြိးသားလေး စားရတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့။
ဒီမှာလည်း အတောင်ပံက ဈေးအချိုဆုံးပါ။ ကြော်စားရင် အလွန်ကောင်း။ တိရိစ္ဆာန်ကုဆရာဝန်က စားတော့စား အများကြီး မစားပါနဲ့တဲ့။ ဆေးထိုးတာ အတောင်ပံကို ထိုးတာမို့ အရမ်းစားရင် အန္တာရာယ်ရှိတယ်ပြောလို့ အခုတော့ ကြိုက်ပေမဲ့ ကြိုကြားကြိုကြားပဲ စားရဲတော့တယ်။
ယူအက်စ်ကတော့ ..တောင်ပံက..တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ နှိုင်းရင်ဈေးကြီးတယ်ခေါ်ရမယ်..။
ခုတလော.. ကြက်တောင်ပံ စပယ်ရှယ်လစ်ဆိုင် နာမယ်ကြီးလာတော့… ပိုတောင်ဈေးကြီးနေသေး..။
Wing Stop တဲ့.. အောက်မှာလင့်ပေးထားတယ်..။
သွားစားကြည့်တာ… ကြက်တောင်ပံကို..ဂျုံမှုန့်..စပိုက်စ်တွေနဲ့. အရသာအမျိုးမျိုးထွက်အောင်.. မျိုးစုံပြောင်းစပ်ထားတာပဲ..။ အစပ်တွေလည်းရှိတယ်..။
အဓိကက. တို့စားရမဲ့…ဆော့စ် ခေါ်ရမလားပဲ..။
KFC က..အတောင်ပံ စပယ်ရှယ်လစ်တော့မဟုတ်ဘူး..ဒါပေမဲ့..သူ့ကြက်ကျော်ကကောင်းလွန်းလို့..ကမ္ဘာကျော်သွားတာပဲ..။
ကြက်တမျိုးထဲနဲ့.. စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်တာမို့ … သူ့စီးပွားရေးလုပ်နည်းဟန်တွေကို.. MBA တန်းမှာတောင်သင်ကြရတယ်..
အဲဒီနည်းက..နှစ်ပေါင်းများစွာလျှို့ ဝှက်ထားတာ… အခုတေ့ာ.. (ရှုံး..လူ ) အဲဒီဆိုင်မှာလုပ်ဖူးတာမို့.. သူက.သိသလောက်.ဖေါ်ရေးပြဖို့ကောင်းတယ်..။
Today we have more than 480 restaurants open and continue to add new stores across the United States and Mexico. As we’ve grown we’ve improved lots of things, but one thing hasn’t changed – our commitment to our original idea of simple concept, brilliant execution.
Find out why Wingstop is Entrepreneur Magazine’s #1 ranked wing franchise with over2Billion wings sold!
ဟုတ်တယ်ဗျို့.. ကျွန်တော်ဒီ Post တက်လာတော့ ရေးမယ်၊ မရေးဘူးစဉ်းစားနေတာ
နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားမိတာက ကိုယ်ကလိုက်ရေးလိုက်ရင် အပြိုင်ဖြစ်နေမှာ စိုးတာပါ.. ခုတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ.. ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ရေးဖြစ်အောင်ရေးတင်ပါ့မယ်.. အချက်အလက် ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပေါ့.. ဖတ်ချင်သူများ စောင့်ဖတ်နိုင်ပါကြောင်း ကြော်ပြာဝင်အပ်ပါသည်…
ရှုံး .. လူ ဆီက နည်းလမ်းသေချာသိရရင် ကောင်းတာပေါ့ …
ကျွန်မက အိမ်တွင်းဖြစ် အဆင်ပြေသလို ကြော်စားတာလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ရုံပါပဲ … နံမည်ကလဲ ဘာပေးရမှန်းမသိလို့ ကလေးတွေခေါ်သလိုပဲ ပေးလိုက်တာ ..
ရှုံး .. လူ ရေးမှာကို စောင့်ဖတ်ပါ့မယ် ..
ဖက်မယ် ဖက်မယ် အဲ … ဖတ်မယ် ဖတ်မယ်
အခု ဗိုက်ဆာလာပြီ … ကြည့်ကာမှ ပိုဆာတယ်
ဒီနည်းလေးလည်း ကူးမှတ်ထားလိုက်ပါပြီး။အရင်က ပေါင်မုန့်ခြောက်အမှုန့်ကိုထည့်ကြော်တာတော့သိတယ် ဒါပေမဲ့ အချိုးအစ တွေသေချာမသိဘူး။ ခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ။ ခုလိုမျှဝေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်…နောက်လည်း ခုလိုမျိုးလေးတွေ မျှဝေပါဦး စောင့်မျှော်နေပါတယ်။